Home आर्थिक आजदेखि के खुल्ने, के नखुल्ने ? पसल अब बार अनुसार खुल्ने, हेर्नुहोस्...
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा २१ दिनपछि निषेधाज्ञा भने केही खुकुलो हुने भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिजोको बैठकले आज बिहीबारबाट जोर बिजोर प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै पसलहरु पनि समय निर्धारण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । कार्यालय र व्यवसायहरुले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने भदौ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा जारी नै रहने जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी भाँडा र भान्साजन्य साथै त्यहीँ प्रकृतिका अन्य पसलहरु साताको आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइने जानकारी दिईएको छ । यसैगरी फर्निचर र अटो मोवाइल सम्बन्धी पसल साताको सोमबार र बुधबार मात्र खोल्न पाइने बताईएको छ ।
Previous articleलकडाउन भरि नेपाली जनता कसैले भोक-भोकै बस्नु पर्दैनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली !
Next articleनेकपाका कार्यकर्ताले फेसबुक, टि्वटरमा आफ्ना नेताविरुद्ध लेख्न नपाउने